Laga yaabaa 30, 2018 admin
Report Kraken Daily Market for 30.05.2018
$180M baayacmushtari jireen dhamaan suuqyada maanta
Booqo qaybta About on our blog wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Report Market Daily ku Kraken halkan
fulinta sharciga Jarmal ka iibiso cryptocurrency qabtay heshay $ 14 milyan
Mas'uuliyiinta Jarmal ayaa kaliya ku dhawaad ​​dhigay $10 million ka iibinta Seeraar in ay qabteen baarista dambiyada. Sidoo kale, oo iyana waxay sameeyeen dheeraad ah $4 million ka iibiso cryptocurrencies kale.
The cryptocurrencies la iibiyey ayay ka mid ahaa 1,312 Bitcoins, kuwaasi oo ay inta badan qabtay olole on boosteejo ah oo lagu magacaabo LuL.to, kaas oo si sharci darro ah ku iibinaya eBuugaag koobigeyda iyo buugaag qiimo aad u hooseeya. Goobta ayaa la qabtay oo la xakameeyey oo la soo dhaafay June, ka shaqeeya ay la xiray iyo hantidooda galay fund ah oo caadi ahaan loo isticmaalo macluumaadkii booliska.
sale ayaa ka dhacay in ka badan laba bilood, taxane ah oo in ka badan 1,600 xawaalad on boosteejo ah oo ganacsi cryptocurrency Jarmal.
AIgatha taariikhda crowdsale ayaa lagu dhawaaqay
AIgatha crowdsale furmay on 5. Jun 2018. AI Service Platform ku saleysan Nidaamka qancintu
AIgatha ayaa lagu soo koraya xisaabinta loo qaybiyey iyo sirdoonka macmal in ka badan sano, inta badan kuwaas oo codsatay in cilmi tacliimeed. Kuwaasu haddaba waxay sidaas lagu biiriyo blockchain si ay u abuuraan technology kale oo dhan oo cusub. Waxaan ku samaynaysey dadaal in dadka la technology sare, qalabaynta dadka qaba awoodda creativities fulinta, hagaajinta tayada dadka ku nool, oo hagaajinaysa horumarinta ilbaxnimo caalami ah.
331 maal-crypto Japanese dhawaaqay $ 1m ama ka badan faa'iidada in 2017
Hay'adda National The Tax of Japan ayaa sheegay in 331 oo ka mid ahaa 549 maal-crypto shaqsi diiwaan kasbadeen ka badan 1 milyan oo doolar in faa'iido by Ganacsi lacagaha dalwaddii.
Kooxdu waxay canshuurta ee mas'uul ka ah baaritaanka ayaa sheegay in 2017 hawlaha ganacsiga crypto weheliso Seeraar maalgashado faa'iido si kor loogu qaado GDP Japan ayaa by 0.3%
Austria ayaa qorshaynaysa in ay sharciyaynta Seeraar sida dahab iyo taagayo
maaliyadda Austria ee mi ...
Post Previous:Maxaa cryptocurrency waxaa maal lagula talinayaa in ay iska iibiso, kaas oo ka mid ah si ay u sii?
a ayaa sheegay in: